Howlgal Gaar ah oo xalay ka dhacay Degmada Hodan | Baydhabo Online
Howlgal Gaar ah oo xalay ka dhacay Degmada Hodan
Kadib markii xalay Bambo gacmeed lagu weeraray Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya oo fariisin ku lahaa Degmada Hodan gaar ahaan xaafada Siigaale ayaa Ciidanka Dowladda waxa ay sameeyeen Howlgal lagu baadigoobayo Raggii ka dambeeyay falkan, inkastoo Bambo gacmeedkaas uusan geysan khasaare.
Ciidankii fariisinka halkaasi ku lahaa oo gurmad ahaan ugu yimid Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee NISA ayaa waxa ay halkaasi ka sameeyeen Howlgallo dad lagu soo qab qabtay kuwaas oo looga shakiyay in ay ku lug lahaayeen Bambo gacmeedkan Ciidanka lagu weeraray.
Inta la ogyahay Howlgalkan ayaa waxaa lagu soo qab qabtay dad kor u dhaafaya 20 Qof, waxaana intii uu socday Howlgalkan ay Ciidanka rideen Rasaas fara badan, 1 QOf ayaa ku dhintay halka sidoo kalena uu ku dhaawacmay Qof kale Rasaasta ay fureen Ciidanka.
Dadkii lagu soo qab qabtay Howlgalkan ayaa waxaa la geeyay mid ka mid ah xarumaha Laamaha Amaanka ee Dowladda, si halkaasi loogu kala saaro, inkastoo markii dambe la soo daayay dadkii dambiyada lagu waayay, halka kuwo kalena weli ay halkaasi ku xiran yihiin.
Maalmihii u dambeeyay Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir waxaa ka dhacayay Dilal qorsheysan kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda.